အုံးဖြန်မိုင် ဒုက္ခသည်စခန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အုံးပြန့် မိုင် (အုံးပြန့် ဟုလည်း ခေါ်) သည် မြန်မာနယ်စပ်နှင့် ၁၂ ကီလိုမီတာအကွာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်စခန်း ဖြစ်သည်။ ၇၉ ဟက်တာ ကျယ်ပြီး တာ့ (ตาก) ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဖုတ်ဖ (พบพระ) ခရိုင်၊ ခီရီရပ် (คีรีราษฎร์) ခရိုင်ခွဲ၌ တည်ထားသည်။
၂၀၁၄ ဇွန်လတွင် လူဦးရေ ၁၂၉၀၀ ရှိပြီး အများစုမှာ စစ်ဘေးရှောင် ကရင်များ ဖြစ်သည်။
၂ စခန်း မြေမျက်နှာသွင်ပြင်
ရေ၊ မီး၊ နှင့် ဖုန်းလိုင်း၊ အင်တာနက်လိုင်းများ ရနိုင်သည်။ ၂၀၁၂ ခုတွင် မီးလောင်ရာ စခန်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံ မီးသင့်သည်။ အိမ်ခြေ ၁၀၀၀ ခန့်၊ ဗလီ ၃ လုံးနှင့် ကလေးထိန်းကျောင်း ၂ ကျောင်း ပျက်စီးသွားသည်။
တောင်နှစ်ခုကြားတွင် ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကနဦးက သစ်ပင်အနည်းငယ်ရှိသော တောဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၁၂၀၀ တွင် ရှိသည်။ မိုးကာလတွင် ရွှံ့ထူပြီး ဘေးရှိ တောင်နံရံများ ပြိုတတ်သည်။ နွေအခါ၌ ရေအခက်အခဲ ရှိသည်။ အချို့အခါများတွင် ရေအတွက် ခိုက်ရန်ဖြစ်ရသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သာယာသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးရေတံခွန်ဖြစ်သော တီလောဆု ရေတံခွန်မှာ စခန်းအနီးတွင်ပင် ဖြစ်သည်။ ရေတံခွန်အမြင့် မီတာ ၂၀၀-၃၀၀ ခန့် ရှိပြီး အကျယ်မှာ ၄၀၀-၅၀၀ ခန့် ဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာမှ ဧပြီအတွင်း ရေတံခွန် ဖွင့်သည်။
နှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီး ဇုန်(က) နှင့် ဇုန်(ခ) ဟူ၍ ရှိသည်။ ဇုန်တစ်ခုစီ၌ အပိုင်းနံပါတ်၊ အိမ်နံပါတ်များ ထားသည်။ ခန်းမကျယ်၌ လှောင်ထားသော ရိက္ခာတို့ကို လစဉ် ထုတ်ပေးသည်။ ထိုရိက္ခာတို့ကို ထိုင်း-ဗမာနယ်စပ် အကျိုးတူအဖွဲ့ (Thai-Burma Border Consortium) က ထောက်ပံ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ရိက္ခာစာရင်းတွင် ဆန်၊ ကျောက်မီးသွေး၊ စားဆီ၊ ပဲဝါခြမ်းနှင့် ဂျုံတို့ ပါသည်။ မိသားစုအရွယ်အလိုက် ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ခလော ဟေး (lang-th| เกลอร์ เฮห์) - ကရင်တိုင်းရင်းသား၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအဖြစ် ၂၀၀၆ ခုတွင် ရသည်။ ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်တွင် တောင်ပံကစားသမား ဖြစ်လာသည်။ ယခု လစ်သူယေးနီးယားရှိ ဘောလုံးကလပ် ဂျိုနာဗာတွင် ကစားနေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Umpiem Mai Refugee Camp။ Committee for Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand (CCSDPT)။ 12 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Umpiem Mai။ TBC The Border Consortium။ 12 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UPDATE: Fire destroysathird of Umpiem Mai refugee camp။ Karen News (February 23, 2012)။ 12 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Umpiem Mai Refugee Camp." CCSDPT. N.p., n.d. Web. 06 May 2016.
↑ "Umphang Hill Adventure - Thee Lor Sue Waterfall Is Biggest in Thailand and No.6 of the World." Umphang Hill Adventure. N.p., n.d. Web. 06 May 2016.
↑ "Umpium Mai Refugee Camp - Room to Grow Foundation. Umpium Mai Refugee Camp - Room to Grow Foundation. Web. 02 May 2016.
↑ Kler Heh: A remarkable journey from Thai refugee camp to Sheffield United။ FourFourTwo (10 June 2016)။ 12 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အုံးဖြန်မိုင်_ဒုက္ခသည်စခန်း&oldid=479664" မှ ရယူရန်
၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။